Dhammaan wixii ku saabsan dhismaha mashiinka iyo DIY - Ikkaro
Waxaan baran doonaa mashiinada. Sida loo dhiso, loo dayactiro, sida ay u shaqeeyaan, waxa ay ka samaysan yihiin.
Waxaan kala saarnaa mashiinada iyo qaababka, maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in farsamooyinku u qalmaan qayb iyaga u gaar ah, maaddaama ay leeyihiin hay'ad ku filan oo ay sidaas ku sameeyaan.
Mashiinnada waxaan ula jeednaa dhowr shay, qaybo iyo farsamooyin leh ujeedo ama ujeedo gaar ah (beddel ama abuur tamar, qabasho shaqo, iwm.)
Sida loo sameeyo Hypsometer ama xagal iyo mitir masaafad
Si fiican u wac heerkulbeeg, laakiin anigu si aad ah uma cadayn in kani yahay mitir mitir, laakiin waa qalab lagu cabbiro xaglaha ama dhererka.
Sida laga soo xigtay RAE un heerkulbeeg waa a qalab loogu talagalay cabirka dhererka dusha sare ee badda oo ku saleysan barta karkaraya ee cabitaannada.
Marka waan kuu soo wici doonnaa xagal, masaafo iyo dherer mitir sugaya aqristaha inuu noogu daayo faallo magaca qalabkan.
Sida loo sameeyo mashiinka nacnaca cudbiga ah
Dhammaantiin waad ku cunteen nacnac cudbi carwada, laakiin ma waxaad jeceshahay inaad karti u yeelato adigu? Cesar Garci Trujillo, ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo walaaq magnetic
Dad badan tijaabooyin, dhammaan kuwa la xiriira alaabada kiimikada, a kiciyaha magnetic
Marka halkan ayaan ku keenaynaa sida loo sameeyo walaaq kiciyaha guryaha lagu sameeyo
Sidaad u aragto, waxaan u adeegsan doonnaa marawaxad laga helo ilo kombiyuutar oo ay ku xiran tahay magnet neodymium oo ka yimaada disk adag.
Sida loo sameeyo gariiradda Tesla
In kasta oo aysan ahayn tallaabo tallaabo, fiidiyaha soo socda ayaa ina tusaya qaybaha iyo sida loo sameeyo mid ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo bamka biyaha isku halleeya
Raadinta macluumaad ku saabsan bambooyin Haydarooliga, Waxaan ka helay fiidiyowga xiisaha leh bamka miisaanka waxaa sameeyay Alvaro Morante iyo ardayda UPV (Jaamacadda Polytechnic ee Valencia)
In kasta oo aanan fursad u helin, haddana waxaan ku xasuustaa mawduuca Mashiinnada Haydarooliga, Tartan loogu talagalay dhismaha matoorrada haydarooliga ayaa la bilaabay, si loo arko midka biyaha badan ku wareejin kara 1 daqiiqo. Ma aqaano haddii bamka fiidiyowgu uu ahaa tartankan ka socda kulliyadda Warshadahalaakiin waxay iga dhigtay inaan xasuusto
Sida loo sameeyo kombaresarada guriga lagu sameeyo oo leh mootada qaboojiyaha
Laga soo bilaabo Mancera waxay nooga tagayaan cashar ku saabsan sida loo sameeyo kombaresarada guriga lagu sameeyo oo leh mashiin cabsi leh. Casharka ayaa yimid ... Akhri akhriska
Hoyga Korantada Guriga
Kadib markaan daawado fiidiyowgaan, waxaan hubaa inaad sugi doontid dhis kart kar kuu gaar ah. Midka fiidiyowga ku saabsan wuxuu ku saabsan yahay gaari koronto oo guriga lagu sameeyo, guriga la sameeyey sida Mareykanku ugu yeeraan
Bandhigga kartti korantada guriga ee Neurotikart
Oo hadaadan cadeyn, fiiri sida isbedelka tan u shaqeyso kaarka in lagu qanciyo gebi ahaanba inaan sameeyo mid. 6 batteri halkii 4 lagaa siin lahaa taas oo gaareysa 85 km / saacaddii
Waxaan soo guuriyay qoraalka hoose ee sharaxaya Mashiinka Wimshurst, maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo gaar ah oo markii wax laga beddelayo ay kaliya aadi karaan laakiin ;-) Isha laga helayo: Homer's Page, degel aan kula talinayo dhammaan ...
Waxaa alifay James Wimshurst, markii ugu horaysay lagu sharaxay 1883 loona adeegsaday, barnaamijyada kale, sida il danab sarreysa oo loogu talagalay tuubooyinka raajada hore, Waa a mashiinka korantada, oo ka kooban laba saxan oo walxaha dahaarka leh, oo is barbar socda, aadna isugu dhow isla markaana lagu abaabulay isla dhidibka, si ay si dhaqso leh ugu wareegi karaan dhinaca ka soo horjeedka.
Wareeggiisa waxaa lagu fuliyaa iyadoo gacan ka heleysa mashiinka gacanta oo ku shaqeeya laba nooc oo isdabajoog ah oo ku soo biiraya xarig aan dhammaad lahayn, mid baa ka gudbay. Wejiga kore ee cajalad kasta waxay leedahay dhowr qaybood oo bir ah oo ku dheggan dhinacyada geesaheeda, kuwaas oo inta lagu jiro wareegga lagu xoqay laba burush silig bir ah oo rogrogmi kara, oo lagu hayo dhammaadka qaanso bir ah.
Mashiinka fowdada ama laba jibbaaran
Waxay ahayd inaan dhigo cinwaan tabloid 'Sida loo sameeyo mashiin Chaos ah»Taasi waxay umuuqataa inaan dhiseyno a mashiinka burburka weyn ama hal-abuurkii qarnigii 30-aad.
Laakiin aaladda aan ku muujino boostada, in kastoo ay tahay mashiin fowdo, ma ahan hub, laakiin laba laab ah loo isticmaalay fiisigiska loogu talagalay barashada Aragtida Fowdada.
In kastoo laga yaabo inaad xoogaa niyad jabtay, waxaan hubaa inaad ka heshay fiidiyaha ;-)
Dhis qalabka elektaroonigga ee guriga lagu sameeyo
Iyada oo loo marayo Sayniska ku jira cunnooyinka XXI oo maskaxda wax ka eegaya, waxaan ku helayaa qoraal xiiso leh oo leh tijaabooyin elektaroonig ah oo la garaacay. Halkaasna waxaan ku ogaanayaa Qalabka elektaroonigga oo raadinta macluumaadka ayaa bilaabmaysa.
Un qalabka elektaroonigga waa runtii hab fudud oo lagu ogaan karo haddii jirku koronto ku shaqeynayo iyo in kale.
Qalabka elektaroonigga waxaa abuuray William Gilbert iyo inkasta oo aan maanta la isticmaalin maaddaama qalab aad u awood badan oo wax ku ool ah la soo saaray, haddana waxay u muuqataa mid ku habboon a tijaabada physics in lagu sameeyo fasalka sheybaarka.
Jaantus ka mid ah isku-xidhka elektaroolka wuxuu ahaan doonaa sida aan ku aragno sawirka laga helay Zowjada